किन ग्राफिक डिजाइन प्रत्येक व्यवसायको बजार रणनीति को एक हिस्सा हुनु पर्छ - Print Peppermint
नोभेम्बर 28, 2019 | ग्राफिक डिजाइन, मार्केटिङ, सुरूवात
किन तपाईंको बजार रणनीति को लागी ग्राफिक डिजाइन महत्वपूर्ण छ?
के तपाईं आफ्नो मार्केटिंग रणनीति अधिक सफल बनाउन को लागी तरिकाहरू खोज्दै हुनुहुन्छ? यस प्रश्नको उत्तर खोज्नुहोस्, "किन ग्राफिक डिजाइन महत्त्वपूर्ण छ?", तल।
ग्राफिक डिजाइन? के यो केवल, जस्तै, लोगोहरू र सामानहरू होइन?
र तपाईले कसलाई सोध्नु भएकोमा निर्भर गर्दै, तपाई ... प्रकारको हुनुहुन्छ… वास्तवमा गलत छैन। तर यो महत्वपूर्ण छ (र, हामी भन्न को लागी हिम्मत गर्छौं) यो स्वीकार गर्न कि ग्राफिक डिजाइन अन्ततः तपाईंको कम्पनीको मार्केटिंग रणनीति भर एक विशाल, बहुमुखी, र आवश्यक उपकरण हुन सक्छ।
उत्कृष्ट ग्राफिक डिजाइन सरल लोगो भन्दा राम्रोसँग जान्छ। यो प्रिन्ट फ्लायरबाट वेबसाइट वेबसाइट, सोशल मिडिया, र माईल पछाडि फ्याँक्न सकिन्छ।
यो पनि एक उपकरण हो जुन कुनै पनि व्यवसायको मार्केटिंग रणनीतिको योजनामा ​​कुल गेमचेंजर हुन सक्छ। यसले पूर्ण रूपमा नयाँ दर्शकहरूको परिचय गराउँदछ र तपाईंको व्यवसायको बिक्री र मुख्य रूपान्तरणमा महत्वपूर्ण स्पाइकमा पुर्‍याउँछ!
त्यसोभए यदि तपाईं आफैंलाई सोध्दै हुनुहुन्छ, "ठीक छ, तर वास्तवमै ... किन ग्राफिक डिजाइन महत्त्वपूर्ण छ?" ठीक छ, प्रिय मित्र ... मा पढ्नुहोस्!
१. ब्रान्डि Est स्थापना गर्दछ
जब तपाईं म्याकडोनाल्ड वा नाइक जस्ता ठूला कम्पनीहरूको बारेमा सोच्नुहुन्छ, पहिलो कुरा के मनमा आउँछ? तिनीहरूको लोगो, सही?
त्यो किनभने विश्वको सबैभन्दा सफल मार्केटिंग अभियानको विशाल बहुमतले उनीहरूको ग्राफिक डिजाइनको गम्भीर फाइदा लिन्छ। उनीहरूले र color्ग योजनाहरू, लोगोहरू, र डिजाइन शैलीहरू समर्थन गर्दछ जुन उनीहरूको कम्पनीको ब्रान्डि firm स्थिरताका साथ स्थापना गर्दछ - त्यसकारण कुनै पनि समय तपाईले देख्नुहुन्छ कि सुन र रातो रंग संयोजन, वा तपाइँ त्यो साधारण सानो swoosh को एक झलक समात्नुभयो भने, तपाइँको दिमाग यी तत्वहरूमा जडान गरिएको ब्रान्डमा डार्ट हुन्छ। ।
यदि तपाईंले आफ्नो अनुसन्धान गर्नुभयो भने, तपाईंलाई थाहा हुन्छ कि तपाईंको कम्पनीले गर्न सक्दछ ब्रान्डि establish स्थापना गर्न कार्य गर्दछ धेरै तरिकामा।
तपाइँको कम्पनीको ब्रान्डि form बनाउन तपाईले वेबसाइट वा ब्लगमा लिखित सामग्री प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईं आफ्नो ब्रान्डिंग आकार गर्न तपाईंको कम्पनीको सामाजिक मिडिया उपस्थिति प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
तर जब यो तल आउँदछ, फर्मको अनुसरणमा, पहिचान योग्य ब्रान्डि there's, त्यहाँ वास्तवमा तपाईको कम्पनीको सामग्रीको भिजुअल डिजाइन भन्दा बढि प्रभावकारी उपकरण छैन। तपाइँको लोगोबाट तपाइँको साइट र कागज विज्ञापनहरूमा, राम्रो ग्राफिक डिजाइन तपाईको टोलीले यसको मार्केटिंग अभियान र सफल ब्रान्डिifyलाई कडा बनाउनको लागि चाहिने कुरा मात्र हो।
२. तपाईको नाम यसको बजारमा बसोबास गर्दछ
केहि अन्य सुपर प्रख्यात लोगो मार्फत सोच्नुहोस्। के कुनै दिमागमा आउँछ जहाँ सम्पूर्ण लोगोको केन्द्र बिन्दु कम्पनीको नाम भन्दा बढी केही छैन? फेडएक्स, कोका कोला, युट्यूब ... सोच्नुहोस्
यी ब्रान्डको लोगो दृश्य डिजाइनको हिसाबले पागल केहि पनि नहुन सक्छ, तर अझै पनि, ती व्यक्तिहरूको कम्पनीको नामलाई उनीहरूको सम्बन्धित बजारमा व्यवस्थित गर्न प्रयोग गर्दछन्, व्यवसायको एक साधारण पक्षलाई बनाउँदछन् जस्तै तिनीहरूको नाम पहिचान योग्य र उनीहरूको सम्पूर्ण ब्रान्डको प्रतिनिधि। र सेवाहरू।
सरल लोगोहरू र दृश्य मार्केटि campaigns अभियानहरूको पछाडि सोचेर, विशेषज्ञ डिजाइनको कारण, सम्भावित ग्राहकहरूले त्यो व्यवसायको नामको सरल झलकमा व्यवसाय चिन्न र विश्वास गर्न सक्षम छन्। तपाईंको कम्पनीको नाम देखेर विश्वासको भावनाको साथ आउन थाल्छ - विश्वसनीयताको भावनाको साथ जुन तपाईंको कम्पनीको नामको साथ आउँदछ।
तपाईंको ब्रान्डको लागि रचनात्मक, विचारपूर्वक डिजाइन गरिएको लोगोको साधारण अस्तित्व तपाईंको कम्पनीको लागि अचम्मको काम गर्न सक्दछ यसलाई तपाईंको बजारको बाँकी भन्दा अलग सेट गर्नका लागि। तपाईंको सेवाहरूको कारण-र तपाईंको टीमले समर्थन गर्ने दृश्य डिजाइनका कारण-तपाईं तपाईंको सम्बन्धित बजारको बीचमा धेरै तत्काल पहिचान योग्य र विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ।
Cred. विश्वसनीयता लागू गर्दछ
एक परिचित ब्रान्डलाई विचार गर्नुहोस् जुन राम्रो मार्केटिंग अभियान स्थापित गर्न स्पष्ट रूपमा अगाडि बढेको छ, सामाजिक मिडियाबाट, तपाईंको वेबसाइटमा, ईमेल गर्न, सामान्य दृश्य सौंदर्यमा। अब अन्जानमा ब्रान्डि inc, असंगत मार्केटिंग, र उनीहरूको मार्केटिंग प्रयासहरूमा केन्द्रित कुनै वास्तविक दृश्य विषय वा इरादाको साथ कम ज्ञात ब्रान्ड विचार गर्नुहोस्।
दुई बीचमा कुन चाहिँ तपाइँ छनौट गर्नुहुन्छ?
हामी शर्त लगाउन तयार छौं कि तपाई पहिलो विकल्पको साथ जानुहुन्छ। यो ठूलो अंशमा यो तथ्य हो कि ग्राफिक डिजाइनले कम्पनीको विश्वसनीयता स्थापित गर्नमा प्रमुख भूमिका खेल्दछ।
आधारभूत स्तरमा, राम्रो ग्राफिक डिजाइनले तपाइँको कम्पनीमा लगानी सञ्चार गर्दछ; यसले देखाउँदछ कि तपाईं चीजहरू सही बनाउन समय र शक्ति दिन इच्छुक हुनुहुन्छ। यो पनि देखाउँदछ कि तपाईं व्यावसायिकता प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ र यो सुनिश्चित गर्दै कि तपाईंको सेवाहरू र तपाईंको कम्पनी सम्पूर्ण रूपमा ढेरको शीर्षमा बढ्नेछ।
यो एक उद्देश्य तथ्य हो कि उच्च-गुणवत्ता ग्राफिक डिजाइन र अन्य दृश्य मार्केटि elements तत्वहरू विश्वास र विश्वासको भावना जगाउनुहोस् संलग्न संगठनमा। राम्रो ग्राफिक डिजाइनमा जडित विश्वासको सम्भावनाको फाइदा उठाउँदा तपाईंको मार्केटिंग अभियानहरूमा सफलता प्राप्त गर्न अत्यधिक आकर्षक र अत्यधिक महत्त्वपूर्ण तत्व हुन सक्छ।
Tention. ध्यान-देखि-विवरण देखाउँदछ
हामीले अन्तिम बिन्दुमा यसलाई संक्षेपमा उल्लेख गर्‍यौं, तपाईं सहि हुनुहुन्छ! यो अझ विस्तार गर्न लायकको छ किनकि राम्रो ग्राफिक डिजाइनको माध्यमबाट प्रस्तुत ध्यान-विस्तारको प्रमाण कम्पनी संचालनमा विस्तृत प्रतिबद्धता जनाउँछ।
जब हालको र सम्भावित ग्राहकहरूले तपाईंको मार्केटिंग सामग्रीलाई हेराई गर्छन् र उच्च-गुणवत्ता सामग्रीको प्रमाण फेला पार्दछन्, उनीहरू सम्पूर्ण रूपमा तपाईंको कम्पनीको उत्पादहरूको गुणस्तरको बारेमा अनुमानहरू बनाउन सहज महसुस गर्छन्। यदि उनीहरूले तपाईंको सामानहरू हेर्छन् र सोच्छन्, "ओह, ओइक्स ..." राम्रो छ भने, तिनीहरूको अनुमानित हुन सक्छ ... राम्रो छैन।
तपाईंको कम्पनीको मार्केटिंग खेलको दृश्य पक्षहरूमा समय र विशेषज्ञता पोखाउँदा तपाईंको दर्शकहरूले प्रदर्शन गर्न सक्छन् कि तपाईं साना साना चीजहरूलाई पनि सही बनाउने प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ। यदि तपाईंको साइट र सामाजिक मिडिया सामग्री गजबको ग्राफिक डिजाइन गर्व, ग्राहकहरु यो आफ्नो सेवाहरु को गुणवत्ता को एक संकेत को रूप मा स्वीकार गर्नेछ।
यदि तपाइँ सोच्नुहुन्छ कि सम्भावित ग्राहकहरूले तपाइँको उच्च-गुणवत्ता मार्केटिंग सामग्रीको धेरै सोच्दैनन् - यदि तपाइँको लक्ष्य भनेको मानिसहरूलाई तपाइँको साइटमा ल्याउनु हो - फेरि सोच्नुहोस्। मार्केटिंग सामग्रीमा ध्यान-विस्तारका बारे समग्रमा तपाईंको कम्पनीको सफलतामा प्रमुख भूमिका खेल्ने क्षमता छ।
तपाइँको ग्राहकहरु हुनेछ। सूचना।
Read. पढ्न योग्यता बढ्छ
ध्यान दिनको लागि मार्केटिंग अभियानमा भाग लिने कुनै पनि व्यक्तिको जीवनको अर्को महत्त्वपूर्ण तथ्य यो हो कि व्यक्तिहरू लिखित सामग्रीमा प्राय: आकर्षित हुन्छन् जसमा दृश्य तत्वहरू समावेश हुन्छन्। यदि तपाईं आफ्नो फेसबुक टाइमलाइन मार्फत स्क्रोल गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईं सम्भवत एक लेख शीर्षक पछाडि छोड्नुहुनेछ। तर यदि यो एक फोटो र सानो पिल्ला को बारे मा ग्राफिक छ? उम, म भित्र छु!
मार्केटिंग प्रतिलिपिमा ग्राफिक डिजाइनले तपाईंको प्रतिलिपि पढ्न योग्यता बढाउँदछ। दृश्य तत्वहरूले सामग्रीको अधिक सजीलो प्रसंस्करण गर्नका लागि अनुमति दिन्छ। तिनीहरूले पाठको ठूलो भागमा प्राकृतिक विरामहरूको लागि अनुमति दिन्छ, र तिनीहरूले एक झलकमा सम्पूर्ण कुरा कम डराउँछन्।
राम्रो ग्राफिक डिजाइनरले तपाइँको प्रतिलिपि हुन सक्ने तरिका बुझ्दछन् भिजुअलहरू पढ्नको लागि अनुकूलित। उनीहरूसँग टाइपोग्राफी, र colors्ग, आकार, आकार, र दृश्य सामग्रीको शैली को प्रकारको विशेषज्ञता र कुशल समझ हुनेछ जुन तपाईंको सामग्रीको साथ उत्तम काम गर्दछ।
जब व्यक्तिहरूले तपाईंको व्यवसायको लिखित सामग्री हेर्छन् र बुझेका छन् कि यो न केवल दृश्यात्मक अपील र व्यवसायिक रूपमा गरिन्छ, तर यो पढ्नको लागि सजिलो छ तपाईंको पाठ्यक्रमहरूको पोस्ट ठूलो टुक्रा भन्दा राम्रो हुन्छ, तपाईं सायद तिनीहरूलाई फाड्न सक्नुहुनेछैन। ।
यो सरल छ: दृश्य सामग्री प्रक्रिया गर्न सजिलो छ। जब लिखित सामग्री र जानकारीको साथ जोडा मिलाइन्छ, यो आकर्षक, सम्झनाजनक, र रमाईलो छ।
Gre. ग्रेटर विविधता प्रदान गर्दछ
तपाइँको टाइमलाइन मार्फत स्क्रोलिंगको बारेमा कुरा गर्दै: एक सोच्नुहोस् कि तपाइँ आफैलाई कती पटक एक सोशल मिडिया प्लेटफर्म वा वेबसाइट मार्फत स्क्रोल गर्दै हुनुहुन्छ, केवल यो महसुस गर्नका लागि कि तपाइँ पूर्ण रूपमा زون आउट हुनुभयो। यो सबै उस्तै पुरानो सामानहरू छन् ... किन ध्यान दिनुहोस्?
तपाईंको मार्केटि strategy रणनीतिमा उच्च-गुणवत्ता भिजुअल डिजाइन कार्य गर्नु भनेको विविधताको संसारमा ताल्चा लगाउनु हो – र एक नीरस टाइमलाइनमा प्रतिरक्षाको नजिक। शब्द र सामयिक तस्बिर बाहेक केहि पोष्ट गर्नुको सट्टा राम्रो ग्राफिक डिजाइनले इन्फोग्राफिक्स, कस्टम पोस्टरहरू, चंचल विज्ञापनहरू र अन्य पछाडि ढोका खोल्दछ।
तपाईंको मार्केटिंग अभियानमा राम्रो दृश्य डिजाइनको प्रयोगले तपाईंको सामग्रीलाई बासी छोड्न यसलाई लगभग असम्भव बनाउँदछ (थोरै प्रयासको साथ)। त्यहाँ विकल्पहरूको संसार छ, र यस्तो सम्भावना छ कि ग्राफिक डिजाइनले तपाईंको कम्पनीले प्रविष्ट नगरेको ढोका अनलक हुनेछ।
त्यस पछाडि, यो कुरा बुझ्नको लागि यो महत्त्वपूर्ण छ कि आफैंमा यो विविधता तपाईंको लक्षित दर्शकहरूको पूर्ण स्कोप पहुँच गर्न एक आवश्यक उपकरण हो। एक प्रकारको सामग्रीले तपाईंको सम्पूर्ण श्रोतालाई कब्जा गर्दैन; सामग्रीको अर्को प्रकारले तपाईंको बजारको पूर्ण रूपमा छुट्टै क्षेत्रको लागि चासो लिन सक्दछ।
राम्रो ग्राफिक डिजाइन र यसले ल्याउने विविधता तपाईको कम्पनीले पूर्ण विपणन सम्भावना अनलक गर्न आवश्यक पर्ने चीज हुन सक्दछ।
Professional. व्यावसायिकता लाई बढावा दिन्छ
तपाईंको व्यवसायको भित्ता भित्र छ कि, तपाईको ब्यापार कार्डहरू, वा हालको र सम्भावित ग्राहकहरूको दिमागमा, यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईंको कम्पनीले व्यावसायिकता प्रमोट गर्दछ। यदि तपाइँको ब्रान्ड एक रमाईलो, आकस्मिक शैली मा निर्मित छ, यो अझै महत्त्वपूर्ण छ कि तपाइँको कम्पनी एक स्पष्ट अधिकार कायम र यो स्पष्ट रहन्छ कि तपाइँ के कुरा गर्दै हुनुहुन्छ के थाहा छ।
राम्रो ग्राफिक डिजाइन तपाइँको कम्पनी मा र बाहिर पर व्यावसायिकता को भावना मजबूत गर्न को लागी तपाइँको व्यवसाय को लागी हुन सक्छ। यसले प्रमाण दिन्छ कि तपाईंको व्यवसायले गम्भीरतासाथ लिन्छ; यसले तपाईंको व्यवसायको सबै पक्षहरू जानबूझि, विचारशील र रणनीतिक छन् भनेर देखाउँदछ।
तपाईंको कम्पनीको मार्केटि campaigns अभियानलाई शासन गर्ने उत्कृष्ट ग्राफिक डिजाइनको साथ, तपाईंको कर्मचारीहरूलाई निरन्तर तपाईंको कम्पनीलाई गम्भीरताका साथ याद दिलाइनेछ your जुन तपाईंको ग्राहकहरूको हो।
पातलो, पेशेवर डिजाइन डिजाइन हो जुन विकासको लागि तयार छ। यो यसको बजार बुझ्दछ, यो शक्ति र चीजहरु सही गर्ने मूल्य मा विश्वास गर्दछ, र यो व्यावसायिकता र गुणवत्ता मा निर्मित छ।
कार्यस्थल र बाहिर, राम्रो ग्राफिक डिजाइनले सुरक्षा र महत्त्वको भावना अनलक गर्न सक्दछ - र परिणामस्वरूप सबैसँग जोडिएको प्रयास र विश्वासको उच्च स्तर।
Orts. प्रतिस्पर्धालाई समर्थन गर्दछ
ठिक छ ... जब हामी "समर्थन" भन्छौं ... वास्तवमा हामी "कत्लहरू" भन्ने गर्दछौं। ऊ-ऊ। (Mwa-ha-ha-ha-ha ??)
ग्राफिक डिजाइन को बारे मा कुरा यो हो कि सबैले यसको महत्त्व बुझ्दैनन्। हुनसक्छ तपाईको टोलीले (अहिले सम्म ठीकै हो !?) सँधै मूल्यवान छ कि राम्रो ग्राफिक डिजाइनले मार्केटिंग रणनीतिका लागि के गर्न सक्दछ।
तर यसको अर्थ यो हो कि जब तपाईं बजारमा अद्वितीय, किलर ग्राफिक डिजाइनको साथ प्रविष्ट गर्नुहुन्छ जुन तपाईंको प्रतिस्पर्धीहरूको डिजाइनको माईल माथिको छ… राम्रोसँग, तपाईं जीत!
साँच्चिकै राम्रो ग्राफिक डिजाईनले तपाईको कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धा भन्दा अलग सेट गर्न सक्छ। यो तथ्यलाई प्रदर्शन गर्न सक्दछ कि तपाइँ चीजहरूको सही हुने बारे बढी चासो राख्नुहुन्छ, कि तपाइँ अधिक व्यावसायिकतामा समर्पित हुनुहुन्छ, कि तपाइँ छनौट गर्ने कम्पनी हुनुहुन्छ।
यदि तपाईंको व्यवसायको धेरै जसो स struggle्घर्ष देखिन्छ प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूको सम्बन्धमा, ती अन्य कम्पनीहरु को मार्केटिंग सामग्री को माध्यम बाट एक टहल लिनुहोस्। तिनीहरूको ग्राफिक डिजाइन कस्तो देखिन्छ? निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको कम्पनीले केहि राम्रो चीज ल्याउन सक्छ? यो घटना हुनको लागि चालहरू बनाउनुहोस्।
Creative। रचनात्मक परिप्रेक्ष्य जोड्दछ
राम्रो ग्राफिक डिजाइन क्यान्भा खाताको साथ कुनै पनि पुरानो कर्मचारी द्वारा प्राप्त गर्न सकिएन। राम्रो ग्राफिक डिजाईन फिल्डको अध्ययन गर्ने कोहीबाट आउँदछ। यो त्यस्तो व्यक्तिबाट आएको हो जुन सिद्धान्त बुझ्दछ र अद्भुत चीजहरूको सृष्टि पछाडि शिल्प।
तपाईको कम्पनीको मार्केटिंग अभियानमा साँच्चिकै प्रभाव पार्ने उत्कृष्ट ग्राफिक डिजाइन प्राप्त गर्न तपाई बाहिरीमा कसैलाई काममा लगाउन सक्नुहुन्छ - सोच्नुहोस् "ग्राफिक डिजाइनर।" पागल, सही ?!
यद्यपि यसलाई केहि लाग्न सक्छ तपाईको कम्पनीको बजेटमा सर्दै, एक विशेषज्ञ ग्राफिक डिजाइनर भाँडाबाट अन्तिम भुक्तानी भारी हुन सक्छ। कंक्रीट उत्पादनहरू बाहेक, नयाँ लोगो वा लेआउट डिजाइन जस्ता, एउटा ग्राफिक डिजाइनरले तपाईंको टोलीको लागि केही गम्भीर महत्त्वपूर्ण रचनात्मक परिप्रेक्ष्यमा ल्याउँछ।
तपाईं मार्केटिंग मा कुनै अनुभव वा ज्ञान संग कसैलाई आफ्नो विचार विपणन रणनीति को लागी एकल विचार वा निर्माता हुन दिनुहुन्न, सही? तपाइँ टोली निर्माण गर्ने धेरै सूचित र प्रतिभाशाली व्यक्तिहरूको खोजी गर्नुहुन्छ।
एक राम्रो ग्राफिक डिजाइनर रचनात्मक परिप्रेक्ष्य को अन्तिम जलसेक रूपमा विचार गर्नुहोस्।
यदि तपाइँको धेरै भन्दा राम्रो ग्राफिक डिजाइन को विषय मा कम सूचित गरिएको छ भने, एक डिजाइनर एक चेकपोइन्ट को रूप मा सेवा गर्न सक्दछ। तिनीहरूले नयाँ विचारहरू प्रस्ताव गर्न सक्दछन् र तपाईंको मार्केटिंग खेल पूर्ण रूपमा बदल्न सक्छन्।
१०. बिक्री बढाउँछ
त्यसोभए ... यी सबैले के थप्छ? राम्रो पोष्टर र चतुर सामाजिक मिडिया पोष्टहरू? ठीक छ, केहि दृष्टिकोणबाट, निश्चित।
तर दिनको अन्त्यमा, मार्केटिंगमा प्रत्येक प्रयासको साथ, हत्यारा ग्राफिक डिजाइनले सन्तुष्ट ग्राहकहरू र गम्भीरताका साथ बिक्रीमा नेतृत्व गर्दछ।
तपाईंको ग्राफिक डिजाइन, जब यो अद्भुत छ, विश्वास र विश्वसनीयतामा जान्छ। यसले ग्राहकहरुलाई यो बुझ्न मद्दत गर्दछ कि तपाइँ आफ्नो सेवाहरु को लागी गम्भीर हुनुहुन्छ। उत्तम ग्राफिक डिजाइन ग्राहकहरुका दिमागमा टाँसिन्छ, र यसले तिनीहरूलाई बारम्बार फिर्ता ल्याउँदछ।
तपाईंको मार्केटिंग प्रयासहरू मुख्य रूपमा अवस्थित छन् तपाईंको टीमलाई बिक्रीमा नेतृत्व गर्न। राम्रो बिक्री को लागी ती बिक्री को लागी एक्सप्रेस टिकट को रूप मा विचार गर्नुहोस्!
त्यसो भए ... किन ग्राफिक डिजाइन महत्त्वपूर्ण छ?
प्रतीक्षा गर्नुहोस् ... वास्तविकको लागि ?! तिमीलाई अझै थाहा छैन ??
ठट्टा गरेको। हामीले बुझ्यौं। ग्राफिक डिजाइन र यसको फाइदाहरू सुपर जटिल र बहु-स्तरित छन्। प्रशस्त अनुसन्धान गर्न महत्त्वपूर्ण छ ताकि तपाईं ग्राफिक डिजाइनले तपाईंको कम्पनीलाई मद्दत गर्न सक्ने तरिकाहरू राम्ररी बुझ्न सक्नुहुनेछ।
यदि तपाईंसँग अझै यस्तो प्रश्नहरू छन् कि "उह, ग्राफिक डिजाइन किन महत्त्वपूर्ण छ?" त्यो एकदम राम्रो छ! आफ्नो अनुसन्धान ट्रेन मा राख्नुहोस् हाम्रो पृष्ठ जाँच गरेर र हाम्रो कन्ट्रास्टको बाँकी
Prin पूर्ण प्रिन्टिंग समयरेखा: कसरी प्रिन्टि H सयौं बर्ष देखि विकसित भएको छ
कसरी एक व्यवसाय उड्ने व्यक्ति डिजाइन गर्न को लागी वास्तविक पढ़िन्छ →